Deg Deg:Madaxweyne Farmaajo Muxuu ka yidhi Weerarkii Kismaayo – KHAATUMO NEWS
Deg Deg:Madaxweyne Farmaajo Muxuu ka yidhi Weerarkii Kismaayo
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa si kulul uga hadlay weerarkii shalay gelinkii dambe lagu qaaday hotelka Cas-casey oo ku yaalla magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Ugu horreyn Madaxweynaha ayaa Tacsi u diray ehellada ay dadkoodu ku dhinteen weerarkaasi, sidoo kalena ku dhaawaca ah u rajeeyey caafimaad deg deg ah.
Madaxweyne Farmaajo ayaa amray hay’ada amniga inay sare u qaadaan sugida ammaanka.
Sidoo kale wuxuu xukuumadda Soomaaliya faray in si degdeg ah ay gurmad caafimaad ugu fidiso dadka ay culus tahay xaaladdooda caafimaad.
“Innaa Lillaahi wa innaa Ilayhi raajicuun. Weerarkan argagixisanimo ee ka dhacay magaalada Kismaayo waxa uu muujinayaa yoolka cadawga dadka Soomaaliyeed oo salka ku haya in ay meel kasta ku gumaadaan haldoorkeenna iyo guud ahaan dadkeenna.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Dhanka kale Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa ugu baaqay dhammaan shacabka dowlad goboleedka Jubbaland inay xoojiyaan midnimadooda iyo wadajirkooda, islamarkaana ay la shaqeeyaan laamaha amniga ee maamulkaaasi.
Previous Post: Deg Deg Daawo:LIVE ilkacase Oo Si Toos AH Hada Uga Soo Hadlaya Kismaayo,
Next Post: Deg Deg::Dhirbaaxo Culus Oo Ku Dhacday Maamulka Somaliland,